ILianchuang Technology Group ibambe intlanganiso ngokudibeneyo kwikota yesithathu | Lianchuang
ILianchuang Technology Group ibambe intlanganiso ngokudibeneyo kwikota yesithathu
Ngentsasa yango-Okthobha 13, iLianchuang Technology Group yabamba intlanganiso edibeneyo yekota yesithathu ye-2020 eLianchuang Academy. Usihlalo weqela u-Lai Banlai, abaLawuli beQela uZhang Yuqi, u-Chen Ye, u-Wen Hongjun, u-Sihlalo u-Lai Dingquan kunye nezinye iinkokheli, kunye neenkokheli zeqela ezahlukeneyo zeNtloko zamasebe asebenzayo, iintloko zeenkampani ezahlukeneyo zorhwebo, amalungu eKomiti yoLawulo lwezoQoqosho, kunye iintloko zezemali nezabasebenzi bezimase le ntlanganiso. Intlanganiso ibichotshelwe nguChen Ye, uMlawuli weQela kunye noMncedisi kuSihlalo.
Kwintlanganiso, u-Liu Qinghui, usekela mphathi jikelele we-Liantek, u-Yao Li, usekela mphathi jikelele we-Lianchuang Electric Appliance Industry Co., Ltd, Wen Hongjun, umphathi jikelele we-Xinliangtian, u-Xu Jin, umphathi jikelele we-Lianchuang Electromechanical, kunye no-Ning Chuanjiu , usekela mphathi jikelele we-Lianchuang Sanming, ngokulandelelana wenza imisebenzi yekota. ingxelo yomsebenzi. Intatheli nganye isebenzise iseti yedatha ecacileyo nenomdla, enemifanekiso kunye neetekisi ukuhlalutya kunye nokucacisa uphononongo lwentsebenzo kwikota yesithathu, ukugqitywa kwemisebenzi emihlanu yonyaka, kunye neendawo eziqaqambileyo ezimnyama kwikota yesithathu, kunye ukubeka phambili isicwangciso sokusebenza sekota yokuqala. Emva koko, u-Chen Ye, umlawuli weqela kunye nomncedisi kasihlalo, wabhengeza iinjongo eziphambili zeshishini kwisebe ngalinye kwi-2021, kwaye walungiselela ikota yesine yomsebenzi wabasebenzi kwinkampani nganye. Usihlalo uMncedisi uLai Dingquan wenze amalungiselelo aneenkcukacha kunye namalungiselelo omsebenzi ogcweleyo wohlahlo-lwabiwo mali weQela wama-2021.
Ngexesha lentlanganiso, u-Wei Weicong, intloko yesebe le-IT leqela, uxele ngokuphunyezwa kwenkqubo yolwazi yeqela kunye nenkampani nganye ngo-2020. U-Chen Jiandong, umcebisi wangaphandle weqela le-IT, wabelana ngamatyala agqwesileyo olwazi, kwaye wacebisa. iindlela kunye neendlela zokuphucula ulawulo lweshishini ngoncedo lweenkqubo zolwazi. Inyathelo lokuqala.
Usihlalo uLai Banlai wenze intetho yokuqukumbela, egxininisa kwaye ecela umsebenzi onxulumene noko.
1. Qhubeka nokumilisela nokudibanisa ulwazi. Iqela lityale ngaphezulu kwe-20 yezigidi ze-yuan ngaphambi nasemva. Zonke iinkampani kufuneka zikhuthaze ulawulo lolwazi. Bonke abantu abasebenzisa iinkqubo zolwazi, ukusuka kwinqanaba eliphezulu ukuya kubasebenzi abaqhelekileyo, kufuneka bakhuphe izatifikethi zomsebenzi; 2. Inkampani nganye Ngokusebenzisa “iitafile ezintathu zentengiso”, siza kuphonononga ngokunzulu amathuba emarike yommandla ngamnye kunye nemveliso nganye, kwaye sibaleke ukugqibezela izalathiso zeshishini zonyaka; kwikota yesithathu neyesine, inkampani nganye iya kwenza amalungiselelo ohlahlo-lwabiwo mali lowama-2021 nomsebenzi ophambili wezabasebenzi; Okwesine, iqela lazise iitalente zabaphathi abaphezulu kwishishini elinye, wonke umntu kufuneka avule iingqondo, afunde omnye komnye, afunde omnye komnye, enze inkqubela phambili kunye, aphucule ukusebenza kwenkampani kunye nenzuzo, kwaye aphucule izibonelelo zabasebenzi.
Ekugqibeleni, uLai Dong ukhuthaze wonke umntu wathi: "Qhubeka wonwabe." Khuthaza wonke umntu ukuba enze izinto ngokugqithileyo kwaye enze ngcono, ukuze bafumane ixabiso labo kwiqonga laseLianchuang kwaye bafeze amaphupha abo.
Ukuza kuthi ga ngoku, intlanganiso yekota yesithathu yokudibana kweLianchuang Technology Group iqukunjelwe ngempumelelo. Intlanganiso iququzelele imisebenzi ephambili yekota yesine kwaye icacisa isicwangciso-qhinga kunye neenjongo zeshishini ze-2021. Inkampani izakusebenzisa le ntlanganiso njengethuba lokuchonga izibonelelo, ukubuyisela ukusilela, nokwenza imizamo echanekileyo yokubaleka kwikota yesine. Zama ukulwa umdlalo wokuvala ka-2020 kwaye ubeke isiseko esiqinileyo sokuqala kuka-2021!
Ixesha Post: Oct-16-2020